Fitaovana 5 hanatsara ny valinao amin'ny Blogging | Martech Zone
Talata, Novambra 11, 2014 Alakamisy 4 martsa 2021 Ian Cleary
Ny blôgy dia mety ho loharanom-pifamoivoizana lehibe mankany amin'ny tranonkalanao, saingy mandany fotoana ny famoronana lahatsoratra bilaogy ary tsy mahazo ny valiny tadiavintsika foana isika. Rehefa manao bilaogy ianao dia te-hahazo antoka fa mahazo sanda ambony indrindra amin'izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanondro fitaovana 5 izahay izay hanampy amin'ny fanatsarana ny valinao amin'ny fanaovana bilaogy, mitarika fifamoivoizana bebe kokoa ary, amin'ny farany, ny varotra.
1. Mamorona sary an-tsary mampiasa Canva
Sary iray misarika ny sainao ary raha tsy misarika ny sain'ny mpitsidika ny bilaoginao ianao dia tsy hamaky azy io. Fa ny famoronana sary manintona sy mijery matihanina dia tena sarotra ary mandany fotoana ary, raha mahazo fanampiana manam-pahaizana ianao, lafo izany!
Canva dia fitaovana famolavolana sary izay ahafahan'ny olona tsy manana traikefa sy tsy be mpamorona indrindra mamokatra sary tsy mila fahaizana manao sary.
Raha vantany vao misafidy ny karazana sary tianao hamboarina (lahatsoratra Facebook, pin Pinterest, sary bilaogy) ianao dia afaka misafidy avy amin'ny tranomboky misy endrika matihanina izay amboarina vitsivitsy monja dia azo amboarina mifanaraka amin'ny fombanao sy ny zavatra ilainao.
Tsoahy fotsiny ary alatsaho amin'ny sary ilay sary nampakarinao (na safidio avy amin'ny tranomboky lehibe misy sary), apetaho ireo sivana mahasarika maso, apetaho amin'ny lahatsoratra sy ireo singa sary hafa, ary maro hafa.
Misafidiana endrika iray ary ampanjifaiko manokana ireo sary, loko ary soratra
Isaky ny lahatsoratra bilaogy dia alao antoka fa manana sary iray farafaharatsiny mahasarika ny mpamakinao ianao. Ny fampiasa-mpampiasa tsotra an'i Canva dia mora ampiasaina hahafahanao mamorona sary mahasarika ho an'ny bilaoginao ao anatin'ny minitra vitsy. Rehefa mandany fotoana miaraka amin'i Canva ianao dia hanontany tena hoe ahoana no nahatafaranao soa aman-tsara tsy nisy an'io.
2. Fikarohana ireo mpifaninana aminao amin'ny fampiasana Semrush
Ny fahitana hevitra ho an'ny lahatsoratra dia sarotra fa ny fahalalana hoe iza amin'ireo no hitondra fifamoivoizana ho anao dia mety ho sarotra. Ny fahalalana izay miasa ho an'ireo mpifaninana aminao dia afaka manome hevitra sy hevitra sarobidy ho an'ny bilaoginao manokana.
mampiasa Semrush azonao atao ny miditra amin'ny adiresy tranokalan'ny mpifaninana aminao ary mizaha ny lisitry ny teny lakile ambony nomen'izy ireo azy amin'ny Google. Afaka mahita ireo teny lakile ianao, tombatombana amin'ny fikarohana ireo teny lakile ireo sy ny maro hafa.
Raha mahazo fifamoivoizana amin'ireto teny lakile ireto ny mpifaninana aminao dia mety misy fotoana mety hanoratanao votoaty mikendry ireo teny lakile ireo mba hahafahanao mandray ny fifamoivoizan'ny mpifaninana aminao!
Nefa tadidio fa tsy resaka fakana tahaka ny mpifaninana aminao izany. Azonao atao ny mamorona ny lahatsoratrao manodidina ny teny lakile fa ny atiny dia tsy maintsy samy hafa. Te-hanoratra lahatsoratra tsara kokoa ianao noho ny mpifaninana aminao ary hampiroborobo azy. Miaraka amin'ny fanadihadiana vitsivitsy momba Semrush hahafantatra bebe kokoa momba ny mpifaninana aminao ianao ary izany dia hanampy anao hahatratra vokatra bebe kokoa amin'ny bilaoginao.
3. Ampitomboy ny tahan'ny fiovam-po ho an'ny famandrihana mailaka amin'ny alàlan'ny Exit Intent Popup
Raha te hanangana mpihaino tsy tapaka ho an'ny bilaoginao ianao dia lisitra mailaka iray dia tena zava-dehibe. Saingy lasa sarotra kokoa ny manintona ny sain'ny mpitsidika tranokalanao ary mandresy lahatra azy ireo hisoratra anarana na hisoratra anarana amin'ny mailakao hanova azy ireo.
Ny fomba tsara hisarihana ny sain'izy ireo dia boaty iray mipoitra izay mangataka ny adiresy mailaka. Saingy ny boaty mipoitra dia mety ho manelingelina ary miteraka fahasosorana rehefa mijery tranokala ianao.
Ny fomba madio sy mandaitra manodidina ity dia ny fampiasana ny popup fikasana hivoaka, izay mamantatra rehefa mivoaka ny tranokala ianao ary avy eo mampiseho ny popup fotsiny. Azonao atao ny mijery ny tranokala mandritra ny ora maro ary tsy misy zavatra mitranga fa raha vao manandrana mandao ny tranokala ianao dia hiseho ny popup.
OptinMonster dia fitaovana WordPress tena ilaina izay manohana ny popup misy fikasana hivoahana. Solony OptinMonster dia Sumome izay tsy amin'ny WordPress ihany no misy fa azo ampiasaina amin'ny sehatra hafa.
4. Ampiharo ny safidy amin'ny fizarana tsara
Rehefa mahita atiny ao amin'ny tranokalanao ireo mpitsidika dia mety ho mora amin'ny mpihaino azy ireo ny fanamorana azy ireo hizara izany. Midika izany fa ny fizarana sary masina dia tena hita maso ao amin'ny tranonkalanao, ka raha vao mandray azy ireo ny toe-tsaina dia tsindrio iray fotsiny io.
Flare dia mamela anao hampiditra bara fizarana mitsivalana sy mitsivalana amin'ny hafatrao. Mandritra ny fandefasana anao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra dia hita ho hita amin'ny fotoana rehetra ny fizarana fizarana. Vao haingana izy ireo no nanampy tsara kokoa Analytics eo amin'ny lampihazo ka izao ianao dia afaka mahita izay lahatsoratra mahazo ny be indrindra raha oharina amin'ny fitsidihana. iza no mpitaona lehibe mizara ny hafatrao, sy ny maro hafa.
Izy ireo koa dia manana fizarana namana ho an'ny mpampiasa finday.
Ny fifampizarana amin'ny fitaovana finday dia lasa miha-manandanja fa tokony ho azonao antoka fa mora ny mizara.
5. Mizarà amin'ny atiny Buffer ny atiny taloha
Matetika loatra isika dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny atiny vaovao ary manadino ny habetsaky ny atiny efa ananantsika ao amin'ny tranonkalantsika izay mbola ilaina sy sarobidy. Raha manana atiny evergreen (atiny tsy lany daty ianao) dia maninona raha zarainao matetika.
Ireo no karazana hafatra tonga lafatra mba hiomanana sy halahatra mialoha sy buffer dia fitaovana tsara hitantanana an'io. Voalohany, farito ny fotoana tianao handefasana vaovao farany amin'ireo fantsom-piarahamoninao (Facebook, Twitter) ary avy eo dia ampidirinao fotsiny ny lahatsoratra amin'ny filahanao vonona hizara amin'ny fotoana ilaina amin'ny manaraka. Fitaovana mifameno amin'ny Buffer dia Bulkbuffer izay ahafahanao manomana ny hafatrao rehetra ao anaty takelaka ary avy eo manafatra azy ireo any amin'ny Buffer ka ampidirina ho azy amin'ny filaharana izy ireo.
Safidio ny atiny ao amin'ny tranokalanao izay mbola misy ifandraisany ary mamorona takelaka misy ireo fanavaozana tianao hozaraina, ary ampidiro any amin'ny Buffer ity mba hizarana mora sy mandeha ho azy.
Ny bilaoginao dia fananana manan-danja amin'ny orinasanao ary amin'ny fampiasam-bola fotoana fohy dia afaka manatsara ny valin'ny bilaoginao ianao. Tao amin'ity lahatsoratra ity dia niresaka fomba 5 ahafahanao manao izany. Iza amin'ireo no hampiharinao? Manana zavatra tianao ampiana ve ianao?
Ian no CEO RazorSocial ary nanokana ny fiainany niasa hanampiana anao hamantatra ireo fitaovana sy teknolojia tsara indrindra ho an'ny media sosialy. I Ian dia miteny matetika amin'ny hetsika (any Etazonia indrindra), ary manoratra amin'ny bilaogy media sosialy be mpampiasa.
13 Nov 2014 amin'ny 2:17 maraina
Yups…. ny fanaovana bilaogy no fitaovana miavaka ahazoana vokatra tsara. Tsy isalasalana fa tena tsara ny manoratra bilaogy manaitra .Fa raha tsy mahasarika ny sain'ny olona izany dia very maina ny ezaka rehetra ataonao. Tsy maninona ny mametraka ezaka kely sy fotoana kely amin'ny fanaovana bilaogy mba hahazoana olona marobe mivory noho ny zavatra nosoratanao.
Ireo fitaovana ireo, raha ampiasaina am-pahendrena dia tena hamoa. Indrindra ho an'ireo vao manomboka sy olona tsy dia manana traikefa dia harena be ireo fitaovana ireo.
Noho izany, misaotra betsaka tamin'ny fampahalalana anay an'ireo fitaovana ireo hanao asa marani-tsaina mba hisarika ny sain'ny mpitsidika bebe kokoa.
13 Nov 2014 amin'ny 2:26 maraina
17 Nov 2014 tamin'ny 7:07 PM
Lahatsoratra mahafinaritra Ian. Mazava ho azy fa te hanampy koa aho fa ny fahazoana ny mpihaino anao sy ny atiny fanoratana izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpihaino anao dia zava-dehibe amin'ny fahombiazana!